Ama-Basin Foot Copper, ama-Crystal Candle, ama-Bathroom Sinks, i-Kitchen Bowls
Ama-Basin Foot Foot
Izitsha zangasese ze-Copper
Izitsha zeCopper Kitchen
Ama-Chandeliers e-Basket Crystal
I-Basket Crystal Sconces
Sishayele manje + 20 100 222 4297
Ayikho imikhiqizo enqoleni
Ama-Basin Foot FootI-Copper isetshenziselwa ikakhulukazi ezindaweni zokunakekelwa kwezempilo, lapho kunezifo eziyingozi, amabhaktheriya ne-fungus ikholoni futhi iqhubekele emabhokisini, izitimela, amatafula amathreyi, izimpomputhe (isibhamu) kanye namanye amathuluzi namashishini amaningi. I-Copper isiqinisekisile ukuthi ukungcoliswa kwamagciwane okulwa namagciwane I-Copper iqhubeka ibulala amabhaktheriya, ingalokothi ibonakale, futhi iphephile ukuyisebenzisa njengezindawo zethusi ezivimbela ukukhonza njengamanzi okusabalala ekusakazeni kwama-microbes. Lezi zinambuzane zivame ukusinda ezinqeni zesikhathi eside.
Ama-Chandeliers e-Basket CrystalI-Cage metal basket ibhola ubuhlalu
I-Basket Crystal Sconcescrystal-wall-sconces
Ama-Tubs Mass Mass Tubs
Izitsha zangasese zensimbi
Amathrekhi weThebula we-Copper
Amakhansela Okukhanya Ekhishi
Umthamo wePoptop we-Copper
Amabhande Wensimbi E-Copper
I-Decor Decor yasekhaya
Amakhanni e-Iron enza
I-Iron Wall Sconces
Imikhiqizo ye-Copper eyenziwe ngezandla, Amakhansela ezintengo ezinhle kakhulu
Abaculi bethu basebenzisa izinto eziwusizo kanye namathuluzi omhlaba omdala alula okuzenzekelayo okwenza amatshe ezinyawo zethusi, ama-Crystal Chandeliers, izindlu zangasese, ama-Kitchen Bowls, iziqongqo, ukuhlobisa izinsimbi nezindwangu ze-antique zokugqoka izitayela zekhaya nezensimu. Le nqubo ifana nabaseGibhithe baseGibhithe ababesezingeni eliphezulu ekuklanyweni kwezakhiwo nokwakha ubunjiniyela. Akumangalisi ukuthi isigodi saseNile siyikhaya lomuntu owenza amaphiramidi kanye ne-sphinx eziphakathi kwezakhiwo ezidumile emlandweni.
I-A1 i-Egypt igxila kwi-spa yokudala ye-copper izinyawo zokuhamba ngezinyawo, amakhasimende e-crystal, izindlu zokugezela, izibhebhe zetafula zethusi, izitsha zekhishi, ukuhlobisa kwensimbi ukuhleka umzimba womuntu, ikhaya kanye nensimu. Amathuna abonisa ukuthi uFaro wasebenzisa uPedicures ngenhloso yokwelapha isikhumba kanye nobuhle.I-pedicure ivela egameni elithi Latin pedi cura elisho izinyawo ukunakekelwa.Manje, ukuhamba ngezinyawo kusetshenziselwa ikakhulukazi abesifazane emhlabeni jikelele ukunakekelwa kwesikhumba, ukusikwa ngezinyawo nokuphathwa kokwelashwa.
Ama-Basin Foot Foot, Amakamelo Okugeza, Izihloko
Abaculi bethu baseGibithe bangabakhandi ababhebhethekile bezethusi eMedithera. Izitsha zangasese nezitsha zethusi ezitsheni zethusi zenziwe ngezandla, zenziwe ngezinyosi futhi zenziwe njenge-Over mountain, ngaphansi kwezintaba noma ezitsheni zixhomeke ekutheni ifenisha noma amashini angenalutho. Ukuqedwa kwethuthu kwekhanda kungukuqala okushisayo, okushiswa komlilo, okuphucuziwe, i-antique patina, i-nickel ehlanganisiwe kanye ne-verdigris ye-vintage.
I-Copper izwela kakhulu ekuqhubeni ukushisa, isakaza ukushisa ngokulinganayo futhi igcina amandla. I-cookware ye-Copper ivela ebusweni obungenalutho noma i-tin ehlanganisiwe ngokususelwa kuhlobo lokudla.
Antique Vintage Basket Crystal Amakhandlela
Umlando wethu wendabuko waseFrance I-Crystal basket Iqoqo lamakhansela liqukethe izinkulungwane zobuhlalu obuncane obuzobonisa isitayela somnikazi wendlu ukuthola isamba esiphezulu esenziwe ngezandla zokukhanya emhlabeni. Izakhi zethu ze-antique zaseFrance zensimbi ezenziwe ngensimbi ayifani nanoma yikuphi lapho.
Ukunikezwa kwemikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso
Isandla sethu senziwe umugqa sigxilisa ukukhuthazwa kwamakhasimende ethu, abathengisi be-antique, abahlobisa, abanikazi bezitolo, abaculi, izinkontileka, abaqambi bangaphakathi, abakhi, abakhi kanye nabanikazi bendlu. Sisebenzisa ithusi, i-aluminium, insimbi esebenziwe, i-crystal kanye neklasi ukwenza ukwakheka okuhlukile. Imikhiqizo yethu yanikeza iqoqo lezinto ezihlukahlukene ukunikeza ukuhlobisa okuhle.
Sinikeza imikhiqizo yonke imikhiqizo futhi sisabalalisa ngqo kumakhasimende ethu okudayisa nokuthengisa. Singahlinzeka ngokwezifiso ukwenza ubukhulu, ubujamo, ukuthungwa, ukuqedela, ama-logos namasevisi ngesicelo ngasinye.
Sithumelele i-imeyili futhi sizobuyela kuwe, njenge-asap.
© 2018 · a1egypt.com, wonke Amalungelo Agodliwe